कार्तिक २७ गते बुधबार आजको राशिफल ई. सं. २०१९ नोभेम्बर १३ तारिख - Complete Nepali News Portal
कार्तिक २७ गते बुधबार आजको राशिफल ई. सं. २०१९ नोभेम्बर १३ तारिख
ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) सम्पर्क नं ९७७९८४२२१९७३५ आजको राशिफल
आज मिति वि.सं. २०७६ कार्तिक २७ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१९ नोभेम्बर १३ तारिख, परिधावी नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, मार्गशिर्ष कृष्णपक्ष परेवा तिथि, कृतिका नक्षत्र, चन्द्रमा बृष राशिमा, वरीयान् योग, बालब करण चन्द्रवर्ण सेतो, चन्द्रदिशा दक्षिण। नेपालमा, सूर्योदय बिहान ०६ः२४ बजे, सूर्यास्त साँझ ०५ः११ बजे हुनेछ। आजको पर्व तथा मुहूर्त थानकोट महालक्ष्मी यात्रा, शिववास ( रुद्रिपुजा) जुरेको दिन छ। आज जन्म लिने बच्चाको राशि वृष हुन्छ। आज तिल वा धनियाँ मुखमा राखेर जुनसकै दिशाको यात्रा गरेपनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ। यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँअनुसार तिथि, नक्षत्र ईत्यादीमा पनि समय अन्तर हुनेछ ।
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –आज स्वास्थ्यमा चिसो र घाँटीको सामान्य समस्या देखिन सक्छ । कार्यमा बिलम्ब हुनेछ । मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा धनखर्च गर्न मन लालायित हुनेछ । घरायसी कारणबाट खर्चको मात्रामा बृद्धि हुने सम्भावना छ । परिवारमा पाहुनाको चाप बढ्न सक्छ। आज सोचे जस्तो व्यापार नहुन सक्छ। आज तपाईका लागि शुभरङ्ग सेतो, शुभअङ्क २, शुभदिशा दक्षिण, इष्टदेवता लक्ष्मी माता, आजको कार्य्सिद्धि मन्त्र ॐ सिद्धिलक्ष्म्यै नमः मन्त्र ११ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) –तपाईको आजको दिन राम्रो छ । व्यावसायबाट राम्रो फाइदा हुनेछ । गुमेको वा सापटीमा गएको धन फिर्ता आउनेछ । बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत राम्रो छ । मन उत्ताउलो, भावुक र चञ्चल बन्नसक्छ । आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याएर काम बनाउन सकिने छ । रमणीय स्थानको यात्रा पनि हुनसक्छ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग गुलाबी, शुभअङ्क १, शुभदिशा पूर्व, आज कार्यसफलताका लागि ॐ अं अङ्गारकाय नमः मन्त्र १० पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) –आज तपाईका लागि बाह्रौं घरमा चन्द्रमा रहेकाले खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ, मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । पारिवारिक वातावरण पनि तपाईंको अनुकूल हुने छैन । प्रेम सम्बन्धमा चिसोपन आउने छ । लगानीमा रहेका धनको उचित प्रतिफल नआउनाले दिक्क लाग्नेछ । आज तपाईले अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु ठिक हुनेछ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग बैजनी वा पहेंलो, शुभअङ्क ४, शुभदिशा उत्तर आज कार्य सफलताका लागि ॐ बृं बृहस्पतये नमः मन्त्र १९ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) –साथीभाइ र नातेदारबाट उपयोगी सल्लाह र सहयोग प्राप्त हुनेछ । विगतका कमीकमजोरीलाई बेवास्ता गर्दै मन प्रसन्न बनाएर काम गर्नुहोला, सफलता तपाईंको मुट्ठीमा छ । रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो समय छ । आर्थिक पक्ष सबल बन्नेछ, कारोबारमा गतिशीलता आउने छ र व्यवसायबाट पनि राम्रो लाभ हुनेछ । मायाप्रेमका लागि समय जुट्ने छ । विपरीतलिङ्गीबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग नीलो, शुभअङ्क ३, शुभदिशा पश्चिम, आज कार्य सफलताका लागि ॐ शंशनिश्चराय नमः मन्त्र २३ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) –आज कडा मिहिनेतका कारण गुमेको प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त गर्न सकिने छ । नचाहेको क्षेत्रमा विभिन्न जिम्मेवारी वहन गर्दै दौडधूप गर्नु पर्ने दिन छ । सुरुमा दिक्क लाग्दो महसुस भए पनि अन्त्यमा सफलता मिल्नेछ । तर आज सामान हराउने वा प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा धनखर्च हुनसक्छ । व्यापार व्यावसायका क्षेत्रमा साना तिना समस्या देखिन सक्छन् । मनोरञ्जन वा खेलवाडबाट टाढा बस्नु उचित हुनेछ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग कालो, शुभअङ्क २, शुभदिशा दक्षिण, आज कार्य सफलताका लागि ॐ कुलदेवताभ्यो नमः मन्त्र २३ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) –आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धमा आत्मीयता बढ्ने छ । जीवनसाथी वा बालबच्चासँग भावना बुझ्ने प्रयास हुनेछन् । अभिभावक वा इष्टमित्रको शुभकामना र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रयास गरेका काममा शुभफल प्राप्त हुनेछ । गरेका काममा भाग्यले साथ दिनेछ । धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक काममा रुचि बढ्ने छ । सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । रोकिएका काम सम्पन्न हुनेछन् । नसोचेको ठाउँबाट आर्थिक लाभ हुनसक्छ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग गाढा पहेंलो वा केशरी, शुभअङ्क ९, शुभदिशा पूर्व, आज कार्य सफलताका लागि ॐ धर्मराजाय नमः मन्त्र १९ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) –आज सानातिना समस्याको सामना गर्दै निरन्तरको लगनशीलता र संघर्षपछि सफलता प्राप्त हुने दिन हो । सानोतिनो समस्याले तपाईंको उत्साहमा कमी ल्याउने छैन । नयाँ काम थाल्दा व्यवहारिक लाभ पुग्नेछ । तपाईंको व्यक्तिगत दृष्टिकोणले दूरगामी सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्नेछ । अरुको भलाईका लागि आकर्षित बन्नुहोला । आर्थिकरूपमा सबल बन्नु हुनेछ । आम्दानीका नयाँनयाँ मार्ग पत्ता लाग्नेछन् । सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने दिन छ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग नीलो, शुभअङ्क ८, शुभदिशा उत्तर, आज कार्यसफलताका लागि ॐ मृत्युञ्जयाय नमः मन्त्र १० पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) –मायाप्रेम र भावनात्मक क्रियाकलापमा आजको समय व्यतीत हुनेछ । विपरीतलिङ्गी सहयात्रीबाट प्राप्त सल्लाहबाट गरिएको कामबाट फाइदा हुनेछ । सन्तानपक्षको सहयोग मिल्नेछ । समय राम्रो छ, प्रशंसा, बढुवा वा जिम्मेवारी मिल्ने देखिन्छ । हाँसखेल, भ्रमण र मनोरञ्जनका क्रममा दिन बित्नेछ । परिवारजन र आफन्तजनसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम हुनेछ, तपाईंका विचार र भावनामा उनीहरू सकारात्मक देखिने छन् । जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । साझेदारीमा गरिएको व्यवसायबाट लाभ लिन सकिने छ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग हलुका रातो, शुभअङ्क ७, शुभदिशा पश्चिम। आज कार्य सफलताका लागि ॐ कामदेवाय नमः मन्त्र ११ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) –आज तपाईलाई मातृपक्षकोे आशीर्वादले काम गर्न सक्छ । मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ । सिर्जनात्मकता र व्यवहारिकतातर्फ मन आकर्षित हुनेछ । घरायसी समस्या समाधान गर्न सकिने छ । माया र प्रेमको वातावरण हुनेछ । विवाद बाट लाभ मिल्नेछ । आवश्यक र उपलब्धीमूलक रमाइलो यात्रा हुनसक्छ । वैदेशिक प्रयोजनका लागि गरिएको प्रयास सार्थक हुनेछ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत यो राम्रो समय छ । आर्थिक लाभ हुनेछ । पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद रहने छ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग सेतो वा घुर्मैलो, शुभअङ्क ६, शुभदिशा दक्षिण, आज कार्य सफलताका लागि ॐ वास्तुदेवाय नमः मन्त्र ०८ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) –पठनपाठन र बौद्धिक गतिविधिका कारण मानसम्मान र प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुनेछ । अध्ययन, अध्यापन र लेखनकार्यमा उच्च सफलता प्राप्त हुनेछ । बौद्धिक क्रियाकलापप्रति झुकाव बढ्ने छ । व्यावहारिक र प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ । भाइबहिनी र छोराछोरीले सहयोग गर्नेछन् । आफन्तले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् । मन प्रफुल्ल र उत्साही बन्ने छ । घरपरिवारमा रमाइलो जमघट हुने छ । तपाईंले गर्न लागेको काममा सबैले साथ दिनेछन् । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग आकासे, शुभअङ्क ९, शुभदिशा पूर्व, आज कार्य सफलताका लागि ॐ वाग्देव्यै नमः मन्त्र ०७ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) –चौथो घरको चन्द्रमाका कारण चिन्ता बढ्न सक्ने दिन छ। मानसिकतामा केहि विचलन ल्याए पनि प्रेमको वातावरण बन्नेछ । सन्तति पक्षको साथसहयोग प्राप्त हुनेछ । घरायसी सुखको अनुकूलता हुनेछ । नातागोता र आफन्तजनसँग भेटघाटको योग छ । प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन लगानीको सम्भावना छ । परिश्रम गरेबमोजिम आम्दानी र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सल्लाह र परामर्श प्राप्त हुनाले रोकिएको काम बन्ने समय छ ।सामाजिक मर्यादामा प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग कलेजी, शुभअङ्क ४, शुभदिशा उत्तर। आज कार्य सफलताका लागि ॐ अष्टमातृकाभ्यो नमः मन्त्र ११ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) –दाजुभाइ वा नजिकका मित्रबाट विशेष सहयोग र सुख प्राप्त हुने देखिन्छ । पेसाव्यावसाय वा रोजगारीका क्षेत्रमा साख जोगाउन सकिने छ् । आम्दानीमा कमी आउने छैन । व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् । तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुनसक्छ । परोपकारी काममा रुचि बढ्न सक्छ । दिदीबहिनीका काममा सघाउनु पर्नेछ । मेवा मिष्ठान्न र परिकार मिल्नेछ । प्रतिष्ठा बृद्धि गर्ने समय चल्दैछ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग हरियो, शुभअङ्क ३, शुभदिशा पश्चिम, आज कार्य सफलताका लागि ॐ कार्य्विनायकाय महागणाधिपतये नमः मन्त्र ०८ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् असार २६ गते...
आजको राशिफल असार २६ गते शुक्रबार : पाथिभारा माताले सबैको...
पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् असार २५ गते...